Xudur: Carruurta ay soo ridaneyso nafaqo-darrada oo badaneysa
Xudur: Carruurta ay soo ridaneyso nafaqo-darrada oo badaneysa
Photo | 11 bil jir la il-daran nafaqo-darro/Xusni/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 14 January, 2016 XUDUR
(ERGO) - Nafaqo-darro baahsan ayaa laga soo sheegayaa tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool. Ilaa 50 carruur ah oo ay da’dooda ka yar tahay shan sano oo ay soo ridatay nafaqo-darrada ayaa jiifa labo xarun oo caafimaad oo ku yaalla degmadaas.
Carruurta ay nafaqo-darrada hayso waxaa laga dareemayaa caato saa’id ah, barar jirkooda ku jira gaar ahaan caloosha iyo tabar la’aan. Maamuleyaasha xarumaha caafimaadka ayaa noo sheegay inay toddobaadkii hore oo keliya maalin kasta qaabbilayeen in ka badan 30 carruur ah oo ay soo ridatay nafaqo-darrada. "Waxaan bilihii la soo dhaafay daweyneynay carruur ay soo ridatay nafaqo-darrada, laakiin tirada way sii korortay bishan," ayuu yiri Cabdikariim Cabdullaahi Ibraahim oo madax ka ah xarun ay maamusho hay'adda maxalliga ah ee Mardo.
“Waxaan carruurta siinnaa daryeelka caafimaad iyo nafaqada ee ay u baahan yihiin, kuwa ay xaaladdooda liidato ee quudinta u baahanna waan seexinnaa,” ayuu yiri Cabdikariim.
Kororka nafaqo-darrada ayaa lala xiriirinayaa cunto-yari iyo sicir-barar ka jira gobolka Bakool oo ka dhashay waddooyinkii uu raashinka u soo mari jiray deegaannada qaar oo ay go’doomisay Al-Shabaab. Cunto-yarida ayaa si gaar ah u saameysay bulshada ku nool tuulooyinka oo carruurtooda badidood ay nafaqo-darro soo ridatay, maaddaama xoolaha oo ay noloshooda ku tiirsaneyd ay ku la’deen abaar ka jirta gobolka.
“Ma haysan cunto aan ku nafaqeeyo wiilkeyga. Xoolihii aan dhaqaneynay way naga dhammaadeen,” ayay tiri Muslimo Macallin Xuseen oo ka timid tuulo lagu magacaabo Abaqbeedey oo 18 km u jirta Xudur. Muslimo waxay wiilkeeda oo jira 11 bil kula jirtaa xarun caafimaad oo ay maamusho hay’adda Action Against Hunger (ACF) oo ka mid ah xarumaha lagula tacaalo carruurta ay soo ridatay nafaqo-darrada ee degmada Xudur.
“Wuu shubmayay, wuuna matagayay maalmo badan. Hadda markii aan isbitaalka imid ayaa la ii sheegay inay nafaqo-darro hayso,” ayay tiri. Xaruntan iyo xarun kale oo ay maamusho hay’adda gargaarka iyo horumarinta ee Mardo saddexdii bil ee la soo dhaafay waxaa la jiifiyay 625 carruur ah oo dhammaan ay nafaqo-darro haysay. Badidood waxaa laga keenay tuulooyinka Mooragaabey, Garasweyne, Abal, Wanay iyo Abaqbeedey oo hoostaga Xudur.